Sida Loo Sameeyo Saameyn, Blogger, ama Saxafi | Martech Zone
Sida Loo Sameeyo Saameyn, Blogger, ama Saxafi
Khamiis, Agoosto 13, 2020 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Waagii hore, ayaan wax ka qoray sida MAYA loo dhigo blogger. Cilladdu waxay sii socotaa sidii aan ku heli lahaa qulqulo aan dhammaad lahayn oo ah xirfadaha xiriirka dadweynaha ee aan haysan macluumaadka aan ugu baahanahay inaan ku dhiirrigeliyo badeecadahooda ama adeegyadooda.
Muddo ayay qaadatay in si dhab ah loo helo garoon u qalma in la muujiyo. Waxaan email ka helay istiraatiijiyad baraha bulshada oo leh Supercool Hal abuur leh. Supercool waa wakaalad hal abuur leh oo ku takhasusay hal abuurka iyo soosaarka fiidiyowga ee internetka, suuqgeynta fayraska, abuurka fiidiyowga, ololeyaasha warbaahinta bulshada ee isku dhafan, fiidiyowyada fayraska, madadaalada caanka ah iyo websaydhada. Tani waa emayl aan caadi ahayn!
Noocyada 'Blog Blog Pitch'
Garoonka ayaa ahaa shakhsi. Caadi ahaan waxaan helaa go 'buste ah oo dhaji. Isla markiiba waan tirtiraa garoomadaas. Haddii aadan baran karin cidda aan ahay, maxaan kuu dhageysanayaa?
Goobta si kooban ayaa ii sheegaya macluumaadka. Inta badan dadka PR waxay si fudud u gooyaan oo ugu dhajiyaan war saxaafadeed qosol leh jirka emaylka.
Garoonka ayaa i siiya a quote inaad si toos ah u gasho qoraalkayga!
Goobta garoonka waxaa ku jira xiriiriye sheekada dhabta ah (iyo halka aan tixraaci karo oo aan ku tilmaami karo booqdayaasheyda).
Garoonka ayaa ii sheegaya siyaabo kala duwan Waan isticmaali karaa macluumaadka! Kani waa markii aan ilmeeyay iff dhididsanaa. Bal ka soo qaad in… si aan waqtiga ii ilaaliyo, Darci wuxuu mar horeba ka fikiray sida aan ugu dhaqmi karo macluumaadka… wuxuuna ku daray qoraal aan kula xiriiro haddii aan su'aalo ka qabo.
Garoonka ayaa bixiya background khubarada iyo sababta uu muhiim ugu yahay inuu dhageysto.
Garoonku wuxuu ku xirmayaa Darci magaca dhabta ah, cinwaanka, iyo shirkadda (taas oo aan xitaa kor u eegay!)
Garoonku wuxuu leeyahay joojinta! Dadweynaha PR waxay badanaa u diraan emayllo goyn iyo dhajin ah Muuqaalka - toos ah ku xad gudubka sharciga CAN-SPAM.
Kani waa iimayl ku dhow dhow… Waxaan ku qiimeyn lahaa B + adag. Macluumaadka yar ee yar ee maqan ayaa ah boodbooyin aanan u maleynaynin in dad aad u tiro badan oo PR ah ay danayn lahaayeen inay qaataan - laakiin waxay fiicnaan lahayd in la maqlo sababta ay ugu habboonayn lahayd dhagaystayaashayda. Erayo yar oo fudud oo ku jira iimaylka sida
Waxaan ogaaday Martech Zone horay ugaga hadlay fiidiyow iyo baraha bulshada, marka waxaan u maleynayay inay taasi adiga dan kuu tahay…
Tags: garoonka bloggersida loo qayliyosida loo sameeyo bloggersida loo sameeyo wariyesida loo dejiyo saameyn wax ku ool ahsaxafiga garoonkagaroonkasaamaynta garoonkasupercool hal abuur lehheer sare ah
Qalabka Raven: Qalabka-Qalabka-Qalabka-SEO-ka ah ee Loogu Talagalay Wakaaladaha, Freelancers, iyo Suuqa Suuqa
ClickMeter: Raadinta Xiriirinta Ololaha, Raadinta raacinta, iyo Raadinta Beddelka
Jun 16, 2011 saacadu markay ahayd 7:44 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida tan - runtii xiiso leh. Sida qof ku fadhiya xayndaabka PR, iyo aniga oo ah blogger aniga qudhaydu (in kasta oo aan muhiim u ahayn in la dago!), Waa waxtar badan in la arko noocyada garoonnada shaqaynaya. Fursad waxbarasho oo weyn, markaa waad mahadsan tahay!
Hal shay oo aan layaabay inkasta oo ay tahay qodobka 5. Waxaan u shaqeeyaa koox yar laakiin waxtar leh PR / Suuq geyn ahaan shaqadayda maalmeed, mararka qaarkoodna waxaan helaa caynkan oo kale (oo marar dhif ah, sidoo kale samee)
Meelaha aan ka sameeyay, weligay kuma soo darin nooca macluumaadka ku jira qodobka 5, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in dadka aan qotomiyey ay ka fikiri karaan waxyaalahan naftooda - mana doonayo inaan u sheego iyaga sida inay qabtaan shaqooyinkooda (si siman waan u xanaaqsanahay markay dadku sidaa igu sameeyaan).
Si kastaba ha noqotee, qoraalkaaga ayaa iga dhigaya inaan dib uga fikiro jagadaas!
Waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay shakhsiyeynta inkasta oo - aan aad muhiim ugu ahay gaar ahaan tixgelinta dabeecadda isku xiran ee 'isgaarsiinta' casriga '.
Marka, mahadsanid markale!
Jun 16, 2011 at 12: 41 PM
Waxaan halkan ku qaadanayaa aragtida diidmada ah. Muxuu ku jiraa heesaha fiidiyowga siyaasadeed iyo suuq-geynta bulshada ee siyaasaddu waxay ku leeyihiin adiga ama blog-ka Suuq-geynta # 1 maahan mid "shaqsiyeed" hubaal inay magacaaga kujirto laakiin yaa awood uhelaya taas oo haysata otomaatigga emaylka (waxaan u maleynayaa in shaqabixiye aad horey u shaqeyn jirtay uu kufiicanyahay arintaas) # 5 Waan ku raacsanahay wada-shaqeeyaha gebi ahaanba Faahfaahinta ku jirta, waa inaad ogaataa habka ugu wanaagsan ee loo adeegsan karo macluumaadka dhagaystayaashaada laakiin isku xirka qoraalka ayaa ah fikrad fiican. Asal ahaan maxaa yeelay inta badan barnaamijyada kale ee loo yaqaan 'PR pitches nuck' ma ka dhigto tan mid wanaagsan, waxay kaliya ka dhigeysaa inay ka liidato kuwa kale. Garoonkan waxaa sifiican loogu adeegi lahaa in loo aado qof ka tirsan masraxa siyaasada feker ahaanteyda.
Dhinac kasta oo qofkasta oo suuqooda u suuqgeeya sida fayraska wax kasta oo lumiyo kalsoonida aniga ila qabo (laakiin waxay u badan tahay inuu ku guuleysto raadinta iyo kubbadda indhaha ee ereygaas)
Jun 17, 2011 at 3: 26 PM
Siyaasadda iyo suuqgeyntu gacanta ayey ku jiraan, Chris. Waxaan ku doodi lahaa inay ahayd suuq geyntii Obama xafiiskiisa. 'Ololihiisii' rajada iyo isbeddelka ayaa codbixiyeyaashu cuneen. Isticmaalkiisa kuwa raacsan iyo kuwa wax saameeya waxay ahaayeen kuwo aad u cajaa'ib badan, runtii dhaqdhaqaaq xididdada cawska ah. RE: # 1, Waan ku qanacsanahay. Ujeeddadaydu waxay ahayd in Darci uu runti noo yimid inuu na hubiyo ka hor inta uusan qarin… wax badan oo ka mid ah dufcadaha iyo qaraxyada shirkadaha PR ma sameeyaan.
Oktoobar 16, 2014 at 7:22 PM
Doug, sidee ugula talin laheyd qof inuu abuuro xiriirin ka bixid emayl markii loo qoro hal qof oo kaliya (baloog ama weriye) loona diro hal qof isla markaana uusan ku xirneyn liistada boosteejada suuq geynta e-maylka?
Inta badan dadka sharciga ah ee sharci yaqaannada ah ma soo diraan barxado badan oo emayl ah sidaa darteed ma garanayo sida ka bixitaanku u suurtagal noqon karo. Sida iska cad, haddii shirkad kaa diiwaangeliso emaylkeeda suuqgeynta (adigoon dooran), taasi waa sheeko ka duwan.
Oktoobar 16, 2014 at 7:53 PM
Nabade Carri! Dhab ahaantii qaar badan oo ka mid ah dadka sharciga ah ee PR waxay soo diraan emayl ballaaran. Inta badan barnaamijyada 'PR' waxay kuu oggolaanayaan inaad xulato dhammaan saxafiyiintaada iyo qorayaasha wax qora iyo ka dib dir. Qaarkood, sida Meltwater (kafaala-qaade) waxay leeyihiin astaamo Unsubscribe-ka barnaamijkooda laakiin kuwa kale badankood ma leh. Haddii aadan lahayn xiriir ganacsi, runti waxaad u baahan tahay barnaamij kaa gali doona ka-bixidda. Muuqaalka iyo Gmail kaliya ha jarin. Waxaan u maleynayaa in mid macnaheedu noqon lahaa in loo isticmaalo aalad sida Formstack oo kaliya dadkuna ay buuxiyaan foom (ama Foomka Google ee xaashida) spread laakiin taasi waa adag tahay in lala socdo.